> Resource > Video > Sida loo Kordhi Volume faylasha Warbaahinta
Haddii aad mar uun yimaado xaaladdan: xitaa la mugga ee heerka ugu sareeya, file warbaahinta codka HWBush aad aad u yar? Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad la kordhiyo mugga in video ama maqal ah si ay u riyaaqaan xataa sanqadha deegaanka. Sida xaqiiqadu, waxay noqon kartaa mid kasta oo fudud inta aad isticmaali a video tafatirka awood badan qaylqaylin Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Sidaa daraadeed, waxaad kordhin kartaa mugga faylasha warbaahinta qaabab kala duwan sida aad jeceshahay. Hadda Raac tallaabooyinka hoose si aad u aragto sida ay u gaarto.
1 dar faylasha ku jira mugga hooseeyo
Download Free Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (ama Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac)), rakibi iyo waxa maamula. Markaas Guji "Import" in aad ku darto files ku jira mug yar yahay. Waxa kale oo aad si toos ah jiidi-n-tagi karaan faylasha warbaahinta diirada u eegay xagga daaqaddii ayuu hoose. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) wuxuu taageeraa dhamaan qaabab video & audio taageeray, oo ay ku jiraan wmv, MOV, AVI, MKV, MP4, Mpg, MPEG, mod, DV, MTS, AVCHD, M2TS, TS, MP3, AAC, MKA, iyo in ka badan.
2 Kordhi mugga audio iyo prelisten
Jiid-n-hoos u file warbaahinta in ay waqtiga ugu; ka dibna click double iyo "ayeey" Window muuqan doonaa. Tag "Audio" column, guuraan slidebar Volume bidix ama midig si loo kordhiyo ama wax ka hooseeya hoos mugga. Haddii aad rabto in ay dhagaystaan ​​saamayn-waqtiga dhabta ah audio ah, riix icon play ah.
Talo: Waxa kale oo aad sameyn kartaa in libdhi / libdhi soo baxay, hufay garoonka, iwm khaanadda ama bedesho "Video" column inay isku shaandheyn, qabsato duwan, saturation, dhalaalka, saa- iyo xawaaraha video ah.
3 qaabab video / audio saarka Set
Haddii aad ku qanacsan tahay, guji "Abuur" si loo badbaadiyo bedelay files warbaahinta. Here're dhawr fursadood oo aad u:
Save oo ku haboon qalabka sida iPhone 5, iPad mini, iPod Touch, Madaxweyne Siilaanyo 360, PS3.
Save sida qaabab kala duwan sida wmv, MOV, AVI, MKV, MP4 iyo in ka badan.
Si toos ah geliyaan inay YouTube ama gubi in DVD.
Waxaad arki, waxa kaliya si sahlan tahay in la kordhiyo mugga ee files warbaahinta la hago kor ku faahfaahsan. Ka sokow mugga kordhinta, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) kartaa xataa video kala , midowdo videos mid , isku shaandheyn video , jar iyo video dalagga , ku dar image si video iyo in ka badan. Just heli fiican qalab video tafatir oo ay kobciso aad video adduunka.
5 Choices Best u Video Rikoodh Software aad Computer
20-tuuryo keyboard Warqadda laxamiistaha AVID Media
Flash in Video Converter: Beddelaan Flash in ay si fudud u Video